वैदेशिक रोजगारी भित्रको सिण्डिकेट तोड्छु
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा रोहन गुरुङ विजयी भएका छन्। १७ जना सदस्यमा गुरुङ प्यानलका १४ जना विजयी भएका छन्। सरकारी तथ्थांक अनुसार अहिले ३५ लाख युवा विदेशमा छन् । फर्कनेको तथ्थांक सरकारसँग छैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ उत्पादन ३१ प्रतिशत ओगटेको छ।
मुलुकको गरिवी निवारणमा ४१ दशमलव ८ शुन्य दरले कमी आएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा विजयी गुरुङसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानी-
१, संघको कार्य समितिमा तपाईँको प्यानल हावी भयो, के जादु देखाउनुभएको थियो तपाईँले ?
यस पटक ८ सय भन्दा बढी व्यवसायीलाई हाम्रो प्यानललाई रोजेका छन्। मैले कुनै जादु देखाएको होइन। जादु त व्यवसायीले देखाइदिए।
१७ जना कार्यसमितमा हाम्रो प्यानलका ३ जना पराजित भए।
अब प्यानल भन्ने कुरा चुनाव अघिको हो। अव म कुनै प्यानलमा छैन। म अब सबै व्यवसायीको अध्यक्ष हुँ । मेरो मुख्य काम भनेको ब्यवसायी र कामदारको हकहितका पक्षमा वकालत गर्नु हो।
२, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने काम के के छन् ?
अहिले सबैले म्यानपावर व्यवसाय मर्यादित छैनन भन्छन् । ठगी गर्ने माध्यम बन्यो भनेर गुनासो गर्छन। फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय नै अहिलेको मुख्य समस्या हो। कम रकम तिरेर बाक्लो रकम लेखिएको रसिद भरेर कामदार अहिले विदेश गइरहेका छन् ।
यो सरकारले गर्दा नै हो।
यस लगायतका मलेसिया जाने कामदारहरुमाथि स्वास्थ्थ परीक्षण लगायतका विभिन्न संस्थाहरुको सिण्डिकेट छ।
त्यो पनि तोड्न आवश्यक छ। धेरै छन् समस्या ।
नीतिगत सँगसँगै संघ भित्र आन्तरिक सुधारको काम पनि धेरै छ। कुन एजेन्डा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा संघका अग्रज अध्यक्ष, विज्ञहरुसँग छलफल गरेर सम्बन्धित निकायहरुसँग मिलेर काम गर्छु ।
विशेष गरी संघलाई अब प्रविधि मैत्री बनाउँछु । सबै काम अनलाइन सिस्टमबाट गर्ने योजनामा छु ।
३, फ्रि भिसा र टिकट निर्णय लागु भएदेखि त्यो व्यवहारिक छैन भन्नु भयो, कसरी ?
हेर्नुस, ब्यावहारिक भएको भए किन कार्यान्वयन भएन। किन रोजगारीको कोटा गुम्यो। मैले पहिला देखि नै भन्दै आएको हुँ। त्यसलाई खारेज गरेर कामदार विदेश जादाँ मासिक कति तलव पाउँछ। एक महिनाको बराबरको रकम व्यवसायीहरुले लिन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदैँ आएको छु ।
अव यसका लागि हामी बुलन्द रुपमा आवाज उठाउने छौं । यसका साथै हवाइ भाडा तिरेर कुनै कामदार विदेश काम गर्न चाहन्छ भने त्यो बाटो पनि खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने माग हुनेछ।
४, मलेसिया जाने कामदारमाथि आथिर्क भार थपिदाँसम्म संघले किन विरोध नजनाएको ?
हामीले पटक पटक विरोध जनाएका छौं । हामीले सम्बन्धित निकाय गुहारेका छौं । अव उनीहरु नै सुन्दैनन् भने हाम्रो भन्नु के छ र । अब हामी यस मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउछौं । जसले सुन्दैनन् उनीहरुलाई सुन्ने वातावरण बनाउँछौं ।
गाम्का नेपालमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्था, बायोमेट्रिक, भिएलन, माइग्राम्सजस्ता अवैधानिक संस्थाहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ। यसले गर्दा कामदारहरुलाई १७ हजार भार परिरहेको छ।
५, ३५ लाख नेपाली विदेशमा छन् कतिपय देशहरुसँग श्रम संझौता भएको छैन। नयाँ श्रम गन्तब्य खोज्न तपाईँको पहल के हुनेछ ?
हो, धेरै मुलुकसँग श्रम संझौता भएको छैन् । युएइ र बहराइनसँग श्रम संझौता भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन्। संघले अव श्रम संझौता नभएका देशहरुमा श्रम संझौता गर्न सरकारलाई दबाब दिनेछ। नयाँ श्रम गन्तब्य खोजीका लागि आग्रह गर्नेछ। संघको यसअघि म महासचिव थिए। म महासचिब हुदाँ पनि मन्त्रीहरुसँग बैठक बस्दा नयाँ श्रम गन्तब्य खोज्यौं भनेको थिए। सरकारले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएको थियो।
५, वैदेशिक रोजगारमा महिलाहरुको समस्या धेरै छ, त्यसलाई न्युनिकरण गर्न तपाईँसँग के योजना छ?
हो, खाडी लगायत ओमन कुवेत र इराक पुगेका महिला धेरै समस्या छन् । सरकारले ती देशहरुमा घरेलु कामदार जान रोक लगाएपछि अहिले दैनिक १५ देखि २० जना ती देशहरुमा पुगिरहेका छन् ।
भारतको दिल्ली, केरला, थाइल्याण्ड र श्रीलंका हुदैँ उनीहरु ती देशहरुमा पुग्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ। त्यहाँ पुगेर विचल्लीमा परेका नेपाली चेलीको उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नेछु । यसका साथै विदेशमा फसेका नेपाली कामदार, कामदारको शव नेपाल झिकाउन पनि मेरो नेतृत्वले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइरहने छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १, २०७४ ०२:२३:४५